'हामी कर्मचारीकाे पेशागत अधिकार रक्षा गर्दै असमानता र विभेद अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छाैं' - UrjaKhabar
ऊर्जा खबर बैशाख १५, २०७६ 3784
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यही वैशाख १९ गते हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका सम्बन्धमा नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलसँग ऊर्जा खबरले गरेकाे कुराकानी :
आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको व्यस्तता कति छ ?
निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइपछि पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केही अन्योलता थिए । विभिन्न घटनाक्रम विकसित भए। निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा सबै ट्रेड युनियनको सहभागितामा सम्पन्न गराउन काठमाडाैंमा
केन्द्रित हुनुपरेका कारण सबै कार्यालयमा पुग्न सम्भव भएन । छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु परेकाले एकदम व्यस्त छु ।
कति कार्यालयमा पुग्नु भयो ?
हामीले विभिन्न टोलीहरू बनाएर देशभरिका कार्यालयमा खटाएका छौं । मेरो आफ्नै उपस्थितिमा ३० भन्दा बढी कार्यालयहरुमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसके ।
यस पटकको चुनावलाई राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले कसरी हेरेको छ ?
देश संघीयतामा गइसकेको, निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसकेको परिस्थितिमा प्राधिकरणमा यससम्बन्धमा खासै बहस भएको छैन । विगतमा आधिकारिक भएको कर्मचारी संघले यसबारे कर्मचारी माझ कुनै बहस त गरेन नै आफ्नो धारणा समेत राख्न सकेन । यद्यपि, हाम्रो युनियनले आफ्ना कार्यक्रममा यस विषयमा विभिन्न बहस चलायो । तसर्थ, अब प्राधिकरणको संरचना कस्तो हुने ? कर्मचारी समायोजन के हुने ? साथै, प्राधिकरणले जलविद्युत विकासमा कसरी आफूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने ? जस्ता नीतिगत कुरा साथै कर्मचारीको पेशागत अधिकारको रक्षा गर्दै सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासको सम्बन्धमा के कस्ता कुराहरू कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सिंगो प्राधिकरण र कर्मचारीको साझा धारणा बनाउनुपर्ने अवस्थामा यो चुनाव हुँदै छ । त्यसैले यस पटकको चुनाव अन्य चुनावभन्दा फरक
र विशेष छ ।
राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनलाई नै कर्मचारीले किन भोट दिने ?
महत्त्व पूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । हामी देशैभरिका कर्मचारी साथीहरू माझ यही प्रश्नको उत्तर लिएर गएका छौं । युनियलाई नै भोट किन भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा विस्तृत रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छौं । साथै, ४३ वटा
बुँदामार्फत युनियनलाई किन भोट दिने ? भन्ने धारणा समेत राखेका छौं । ती मध्ये केही यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।
* असमानता र विभेद अन्त्य : यसअन्तर्गत ओभर टाइम काज मा भएका विभेद अन्त्य गर्ने, कर्मचारी परिचयपत्र
जस्तो सामान्य र आधारभूत कुरामा समेत विभेद छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने, कर्मचारी अवकाश हुँदा अवकाश भएकै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टा र रकम पाउने व्यवस्था गर्ने, कतै इपिअार (EPR) पाउने कतै नपाउने विभेदको अन्त्य गरी सबैतिर पाउने व्यवस्था गर्ने, सहायक स्तरका कर्मचारी पनि सहायक कम्पनीमा जान पाउने व्यवस्था गर्ने
लगायतका थुप्रै काम हुनेछन् ।
* कर्मचारी सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धमा पोसाक भत्ता, घरभाडा : लगायतका भत्ता वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण भत्ता १५ हजार उपलब्ध गराउने, प्राधिकरण नाफामा रहेकाले नियम बमोजिम बोनस उपलब्ध गराउने, विद्युत सुविधा वृद्धि गर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कर्मचारीका छोरा छोरीलाई छात्र वृद्धिको व्यवस्था गर्ने, महँगी भत्ता लागू गराउने, सेवा प्रवेशको योग्यता बाट कम्तीमा २ पटक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक पर्यटन काज (१हप्ता) उपलब्ध
गराउने हाम्रा मुद्दा छन्र । कर्मचारीलाई तालिम व्यवस्था गर्ने, सरुवलाई व्यवस्थित गर्ने, पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था गर्ने, वार्षिकोत्सव भत्ता १ महिनाको तलबबराबर गराउने लगायतका धेरै कामहरु हामी गर्छौं । यी कुराहरू पूरा गराउन, संस्थालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, समृद्ध र सुदृढ बनाउँदै कर्मचारीलाई सुखी एवं खुसी बनाउन हाम्रो राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनलाई मत दिएर विजयी गराउने भनेका छौं ।
यति धेरै काम गर्छौं त भन्नुभयो । कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले व्यवस्थापनसमक्ष यी मागहरू पूरा गर भन्दै गर्दा संस्थाको अवस्था र हाम्रो आफ्नै हैसियत/आचरणबारे पनि सोच्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले ट्रेड युनियनलाई रूपान्तरण गर्छौं भनेका छौं । जस्तो हाम्रा कमिटीहरू साना बनाउने, कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन गतिविधि सञ्चालन नगर्ने, सूचना प्रविधि, सामाजिक
सञ्जालमार्फत प्रचार प्रसार साथै आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ब्यानरको प्रयोग नगर्ने, महिनामा १ दिन कार्यालय सरसफाइ गर्ने/फूल रोप्ने/ ग्राहकमाझ विद्युतीय सुरक्षा/ विद्युत चोरी सम्बन्धी तालिम/सचेतना कार्यक्रम गर्ने लगायत काम गर्छौं ।
काम गर्दै गर्दा हामी फरक छौं र हामी राम्रो कामका लागि हौं भन्ने सन्देश जान्छ । यतिले मात्र हाम्रा मागहरु पूरा हुँदैनन् । हाम्रा माग पूरा हुन संस्था सुदृढ र आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्दछ । त्यसका लागि पनि हामीसँग योजना छन् । हामीले नीतिगत सुधारमा ट्रेड युनियन भनेर हाम्रो घोषणा पत्रमा यसबारेमा हाम्रा धारणा सार्वजनिक गरेका छौं । जस्तै, विद्युत महशुल समायोजन गर्न, प्राधिकरणका आफ्नै उत्पादन, प्रशारण र वितरणका नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, हाम्रो संचित घाटा अपलेखन गर्न व्यवस्थापन र सरकारलाई दबाव दिन्छौं ।
साथै अनलाइन महशुल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउँछौं । स्मार्ट मिटरले पुराना मिटरलाई विस्थापित गर्छौं , बजेटमा हुने चुहावट र अनियमितता रोक्छौं । बाँकी बक्यौता असुली गराउँछौं । कावडका समान लिलामी गराउँछौं जसबाट संस्थाले १ वर्षभित्रै झण्डै १० अर्ब नाफा गर्न सक्छ । हामी हाम्रो संस्थालाई अझ बढी नाफामा लाने योजना व्यवस्थापनसँग मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौ संस्था आर्थिकरूपमा सम्पन्न भएपश्चात हामीले बढाउने भनेका सबै सेवा सुविधा स्वत: बढ्छन् र हामी बढाएरै छोड्छौ ।
तपाईंको युनियालाई व्यवस्थापनको विरोध गर्न नसक्ने, व्यवस्थापनसँग मिल्ने
भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
केही साथीहरू जो २ वर्षसम्म व्यवस्थापनमा ट्रेड युनियनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । र, व्यवस्थापनले जे भन्छ त्यसैमा समर्थन गर्नुभयो । अहिले चुनावको मुखमा मतदातालाई प्रभावित गर्न उहाँहरूले गर्नुभएको झुटो प्रचार हो
यो। हाम्रो युनियन अघि मैले भनेका हाम्रा घोषणामा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै संस्थालाई समृद्ध पार्ने, कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा वृद्धि गर्ने कुरामा व्यवस्थापन संग सहकार्य गर्छ ।
हामीले सहकार्य गरेरै आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । संस्था नाफामा गएको छ । कर्मचारीको आत्मसम्मान अभिवृद्धि भएको छ । तर, अन्य ट्रेड युनियनका साथीहरू जस्तो कर्मचारीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई खोस्ने गरी व्यवस्थापनले ल्याएका प्रस्तावसमेत विरोध गर्न नसक्ने अनि आरोप अर्कैको टाउकोमा हाल्ने काम हामी गर्दैनौ । कर्मचारीको पेशागत अधिकारको रक्षा र सेवा सुविधा वृत्ति विकासको सम्बन्धमा हाम्रो प्रयास व्यवस्थालाई सहमतिमा ल्याउने रहन्छ यदि यसमा तलमाथि हुन्छ भने हामीले व्यवस्थापन सँग सदैव संघर्ष गरेका छौं र अब पनि गर्छौं ।
कर्मचारीहरुको अभिमत कस्तो पाउनुभएको छ ?
कर्मचारी भनेको शिक्षित र सचेत वर्ग हो । कर्मचारीले सही नीति र सक्षम नेतृत्व भएको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनलाई विश्वास गर्नुभएको छ । निर्वाचनको मुखमा गरिने त्रासको खेती र झुटा प्रचारबाट कोही पनि कर्मचारी प्रभावित
हुँदैनौं र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनलाई दुई तिहाई मतसहित विजयी गराउँछौं भन्ने मत आममतदाता कर्मचारी साथीहरूको रहेको छ ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष मेरा मित्र जनार्दनजीले हाम्रो युनियनले जितेमा वडा अध्यक्षमार्फत तलब खानुपर्छ भन्नुभएको रहेछ । म उहाँ लगायत सबै कर्मचारी साथीहरूसँग के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु भने माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ को क्षमता
वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोधमा बाबुराम भट्टराई, आँधीखोला आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने राधाकुमारी ज्ञवालीको निर्णयका बिरुद्ध लडेर सफलता हात पारेको हाम्रो युनियन सरकारले त्यस्तो खालको निर्णय गर्छ भने शशक्त प्रतिरोध गर्न
तयार र सक्षम छ । र, जनार्दनजी लगायत कसैले पनि वडा अध्यक्षसँग मागेर तलब खानु नपर्ने कुराको ग्यारेन्टी हाम्रो राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले गर्छ।
संस्थालाई सबल, समृद्ध र सुदृढ बनाउँदै कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने र सेवा, सर्त, सुविधालाई वृद्धि गर्दै लैजानको लागि राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनलाई दुई तिहाई मतसहित विजयी गराउन सबै कर्मचारी साथीहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछु ।